टिपनटापन Archives - Page 10 of 21 -
पाका महिला गर्भवती हुनु कत्तिको जोखिम ?
छोरीको मृत्युले शोकाकुल भएकी बेलायतकी एक महिला छोरीको अन्डामार्फत आफू गर्भवती हुन चाहान्छिन्। अर्थात छोरीको अन्डालाई प्रयोग गरी हजुरआमा बन्न चाहान्छिन्। के यस्तो गर्भ बोक्दा खतरा छैन त? सामान्यतया युवतीहरुको तुलनामा वृद्ध महिलाहरु बच्चा जन्माउने दृष्टिकोणले उच्च खतरामा हुन्छन्। तर ५० वर्षमाथिका महिलाहरु इन भाइट्रो फर्टिलाइजेसन (आइभीएफ) माफर्त गर्भवती हुने गरेका छन्। लामो समय बच्चा नभएका महिलाहरु आईभीएफमार्फत उपचार गरिरहेकै बेला पाका महिलालाई पनि यो उपाचार पद्धति निकै प्रभावकारी भएका… पुरा पढौ
महिनावारी चक्र भन्नाले महिलामा हुने मासिक प्राकृतिक परिवर्तन हो । यो चक्र महिला शारीरिक रूपमा परिपक्व भएको जानकारी दिने एक प्राकृतिक संकेत हो । महिनावारी हुनु लाई नछुने हुनु, पर सर्नु वा रजस्वला हुनु भनेर पनि चिनिन्छ । साधारण त यो हरेक महिना हुने गर्छ । पाठेघर सङै जोडिएर रहेका २ अण्डासयले हरेक महिनामा पालो पालो अण्ड उत्पादन गर्छ । अण्ड उत्पादन पछि पाठेघरमा बच्चालाई चाहिने बाताबरण बन्न थाल्छ ।… पुरा पढौ
रगतमा चिनीको मात्रा आवश्यकताभन्दा बढी हुने अवस्थालाई मधुमेह भनिन्छ। मधुुमेह एक दीर्घरोग हो। जसले शरीरका संवेदनशील अंगहरु आँखा, स्नायु, मुटु, मिर्गौला र खुट्टामा खराब असर गर्छ। मधमेहका बिरामीहरुमा सामान्य व्यक्तिको तुलनामा दुई गुणा बढी आँखाको समस्या देखिन्छ। आँखामा हुने समस्यामध्ये डाइबेटिक रेटिनोपेथी दृष्टिविहीन गराउने कारणमध्ये एक प्रमुख कारण हो। के हो डाइबेटिक रेटिनोपेथी?मधुमेहको कारणले गर्दा दृष्टिपर्दाका रक्तनलीमा असर पुगी रक्तश्राव र चिल्लो जमेर डाइबेटिक रेटिनोपेथी हुन्छ। जसको समयमै उपचार नभए दृष्टिपर्दामा… पुरा पढौ
हरेक महिलाको सुन्दर देखिने चाहाना हुन्छ । सुन्दर देखिन महिलाहरु विभिन्न प्रकारको मेकअप गर्ने गर्छन् । भनिन्छ, महिलाहरुका लागि मेकअप प्राकृतिक कुरा नै हो । तर, सुन्दर देखिने होडमा आफ्नो अनुहारको छालालाई नै असर पर्ने गरी मेकअप गरिरहेका पनि हुन्छन् कतिपय महिलाहरु । जसले सुन्दरभन्दा पनि अझ धेरै उमेरको देखाइरहेको हुन्छ । महिलाहरुले मेकअप गर्दा सामान्य भन्दा सामान्य गल्तीले पनि कुरुपतालाई प्रसय दिइरहेको हुन्छ । ती सामान्य गल्ती के–के हून्… पुरा पढौ
हास्ने तरिकाबाट थाहा पाउनुहोस् मान्छेको बानी
भनिन्छ जो हाँस्छ उहि बढी बाँच्छ । चिकित्सकबाट नै प्रमाणित कुरा हो हास्नु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक छ । हाँसो भनेको एक प्रकारको औषधि नै जसका धेरै फाइदा छन् । समान्यतया: व्यक्ति अनुसार, हाँसो पनि फरक फरक हुन्छ । कोही हाँस्दा मुसुक्क मुस्कुराउँछन् भने कोही दिल खोलेर हाँस्छन् । समुन्द्र शास्त्र अनुसार, व्यक्तिको हाँस्ने शैलीका आधारमा उसको स्वभाव पत्ता लगाउन सकिन्छ । यसरी थाहा हुन्छ हसाईबाट स्वभाव खित्का छाडेर हाँस्ने व्यक्ति… पुरा पढौ
किन पर्छ चायाँ, कसरी पाउने मुक्ति ?
जाडो र गर्मी दुवै मौसममा कपालमा चाया पर्ने समस्या हुन्छ । टाउकोमा छालाका कोष मर्ने र नयाँ पलाउने क्रम निरन्तर चलिरहन्छ । यस्तो वेला टाउकोमा सेता, मसिना फुस्रा दाग देखिन्छन्, जसलाई हामी चाया भन्छौँ । कारण सरसफाइ पनि चायाको कारक हो । सरसफाइमा ध्याननदिने मानिसमा चाया पर्ने सम्भावना हुन्छ । कपाल कम नुहाउने बानीले पनि चाया पर्न सक्छ । शरीरमा हुने हर्मोन परिवर्तन, वंशाणुगत गुण, टाउकोमा विभिन्न रोग, अस्वस्थकर खानपान, कपालमा केमिकलको प्रयोगजस्ता कारणले पनि… पुरा पढौ
अण्डा मांसहारी की शाकाहारी ?
अण्डा आफैमा पौष्टिक तत्वले भरिपुर्ण चिज हो । अण्डामा भिटामिन ए, फोलेट, भिटामिन बी टू, भिटामिन बी फाइभ, भिटामिन बी १२, फस्फोरस, सेलेनियम, भिटामिन डी, इ, के तथा जिंक लगायतका तत्व पनि पाइन्छन् । यी तत्वले शरीरलाई दाह्रो राख्ने, दिमाग तेजिलो बनाउने र आँखाको ज्योति बढाउने गर्छन् । मानिसहरुले दैनिकरुपमा अण्डा सेवन गर्न पर्नेमा चिकित्सकहरु जोड दिने गर्छन् । विज्ञहरुका अनुसार एउटा अण्डामा यतिधेरै पौष्टिक पदार्थ हुन्छ की त्यसले एउटा… पुरा पढौ
महिलालाई खुसी राख्न तथा महिलालाई पट्याउनका लागि पुरूषको हासोँ नै काफी हुने एक अध्ययनले देखाएको छ । महिलाहरु पुरूषको हासोँबाटै प्रभावित हुने उक्त अध्ययनले दावी गरेको छ । पुरूषहरुको हाँसोले महिलाहरूले उक्त पुरूषलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै परिवर्तन हुने बताइएको छ । अध्ययनमा के बताइएको छ भने जब पुरूषहरु महिलामाथि हावी हुन्छन् तब महिलाले उक्त पुरूषले हासेँर भनेको कुरालाइ सहजै स्वीकार गर्छिन् । यस्तै, अध्ययनले महिलालाई हाँसेर कुनै पुरूषले सेक्ससम्बन्धी कुनै आपत्तिजनक… पुरा पढौ
अकबरे खुर्सानीका अचम्मका फाइदा
अकबरे खुर्सानि स्वादका लागि नभइ स्वाथ्यका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक छ । यो खुर्सानि तपाई हाम्रो घर गाउमा पनि पाइने खुर्सानि हो । यसलाइ डल्ले खुर्सानी पनि भनिन्छ । खानाको स्वाद बढाउनुका साथै औषधिका रुपमा पनि प्रयोग हुन्छ । यो खुर्सानी खाँदा अरू खुर्सानीको तुलनामा अति नै पिरो र मिठो पनि हुन्छ । यो नियमित खान सके स्वास्थ्यमा निकै नै फाइदा पुग्छ । डल्ले खुर्सानीको नियमित प्रयोगले ग्यास्टिक तथा… पुरा पढौ
हाम्रो शरीरमा धेरै अंग छन् । धेरै अंगहरु दुईवटा भएपनि मुटु एउटा मात्रै हुन्छ । मष्तिस्कको पनि दुई भाग हुन्छ।किड्नी,फोक्सो दुईवटा हुन्छ । कलेजो दायाँ बायाँ दुई भाग हुन्छ। बाहिरबाट हेर्दा मुटु मुठ्टी आकारको हुन्छ।मुटुमा चारवटा कोठा हुन्छन्, दुईवटा तल र दुईवटा माथि। मुटुबाट दुईवटा नसा निस्किएका हुन्छन् जसमध्ये एउटा टाउकोबाट आएको हुने गर्छ भने अर्को शरीरको तल्लो भागबाट आउँछ। तलबाट आउने नसाले फोहर रगत लिएर आउछ। यसरी आएको रगत… पुरा पढौ